कुन वाणिज्य बैंक अघि को पछि ? हेरौ तुलनात्मक अध्ययन – Insurance Khabar
कुन वाणिज्य बैंक अघि को पछि ? हेरौ तुलनात्मक अध्ययन
प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार १३:४८
नेपालमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरु रहेकोमा नेपाल स्टक एक्सेंजमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरु कारोवार हुन्छन । रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक बाहेक अरु बाँकी २७ वाणिज्य बैंकहरु शेयर बजारमा कारोवार हुने गरेका छन् ।
धेरै प्रति शेयर आम्दानी, थोरै मूल्य आम्दानी अनुपात र मूल्य र किताबी मूल्यको अनुपात (पीबी रेसियो ) थोरै भएको कारणले गर्दा पनि वाणिज्य बैंकहरु नेपालको शेयर बजारमा अण्डर भ्यालुड जोन तर्फ छन् भन्दा फरक नर्पला ।
ठुलो पुँजी भएको सेक्टर भएको कारणले गर्दा अन्य सेक्टर भन्दा यो सेक्टरमा शेयरको आपूर्ति धेरै छ । यही कारणले करोवारीहरुलाई वाणिज्य बैंक त्यति उपयुक्त नभएपनि दिर्घकालिन लगानीको लागि उपयुक्त क्षेत्र भएको शेयर बजारका जानकार बताउँछन् ।
२७ वाणिज्य बैंक मध्य दुई वटा वाणिज्य बैंकले मात्र ८ अर्ब पूँजीको लक्ष्य पुर्याउन बाँकी छ । कुमारी बैंक र एनसीसीबीले मात्र सो लक्ष्य हासिल गर्न सकेको अवस्था छैन । २ बैंकको पनि निकै थोरैले मात्र पुँजी वृद्धि गर्न बाँकी रहेकोमा बोनस शेयर बाटैसो पुँजीको लक्ष्य हासिल गर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
२७ वाणिज्य बैंक मध्य जगेडा कोषमा नेपाल बैंक सबै भन्दा बलियो देखिएको छ । नेपाल बैंकको जगेडामा १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संचित छ ।
हेरौ २७ वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी र जगेडा कोषको अवस्था ( राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको दोश्रो बजारमा कारोवार नभएको कारणले गर्दा समावेश गरिएको छैन। )
चुक्ता पुँजी गणना गर्दा बुक क्लोज पछिको पुँजी लगिएको हो ।
निक्षेप र कर्जाको मामलामा एन आईसी बैंक सबै भन्दा अघि देखिएको छ । एनआईसी बैंकले १ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने १ खर्ब ४९ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
हेरौ २७ वाणिज्य बैंकको निक्षेप र कर्जाको अवस्था
खुद नाफाको आधारमा नबिल बैंक अघि छ । नबिल बैंकले दोश्रो त्रैमास सम्म २ अर्ब १७ करोड खुद नाफा गरेको छ। प्रति शेयर आम्दानीको आधारमा पनि नबिल बैंक अघि छ । नबिल को प्रति शेयर आम्दानी ५४ रुपैया २५ पैसा छ । २७ वाणिज्य बैंक मध्य १४ वटा वाणिज्य बैंकले यो ६ महिनाको अवधिमा १ अर्ब भन्दा धेरै खुद नाफा गर्न सफल भएका छन् ।
हेरौ २७ वाणिज्य बैंकको खुद व्याज आम्दानी र खुद नाफाको अवस्था
प्रति शेयर आम्दानीको आधारमा नबिल बैंक अघि छ। नबिल बैंकको प्रति शेयर आम्दानी ५४ रुपैयाँ रहेको छ। हेरौ २७ वाणिज्य बैंकको प्रति शेयर आम्दानीको अवस्था :